बखत र प्रतिभा एकै साथ मिडियामा -खुल्यो नयाँ रहस्य ! भाइरल भएको बेलामा विवाह नै भएको थिएन केही महिना संगै बस्ने सम्झौता मात्र भएको थियो…. (भिडियो हेर्नुस्) – Khabar Patrika Np
बखत र प्रतिभा एकै साथ मिडियामा -खुल्यो नयाँ रहस्य ! भाइरल भएको बेलामा विवाह नै भएको थिएन केही महिना संगै बस्ने सम्झौता मात्र भएको थियो…. (भिडियो हेर्नुस्)
प्रकाशित मिति: बिहिबार, फाल्गुण १३, २०७७ समय: २३:२४:४५